သတင်း - အစမှတ်အသစ်၊ ပန်းတိုင်အသစ်၊ လေထုအသစ်
အချိန်တွေ တဖျပ်ဖျပ်ခတ်ပြီး 2016 ခုနှစ်ရဲ့ ခေါင်းလောင်းသံက မျက်စိတစ်မှိတ်အတွင်းမှာပဲ မြည်ပါတော့မယ်။နှစ်သစ်ကူးနေ့အခါသမယတွင် Feice Explosion-proof Electric Co.,Ltd. မှ ဝန်ထမ်းများနှင့် Feice ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဂရုစိုက်အားပေးကြသော အလွှာပေါင်းစုံမှ မိတ်ဆွေများအားလုံးကို စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့် နှုတ်ခွန်းဆက်သရင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါသည်။ ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး- မင်္ဂလာနှစ်သစ်။အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေ။ပျော်ရွှင်သောမိသားစု။
2015 ကိုပြန်ကြည့်ရင် အရမ်းပျော်တယ်။Feice များသည် ၎င်းတို့၏ ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့် ချွေးများဖြင့် အောင်မြင်မှုအသစ်များကို ဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ရောင်းရငွေ ယွမ် ၃၁၅ သန်း ရရှိခဲ့သည်။2010 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် Feice Explosion-proof Electrical Appliance Co., Ltd. ကို Wenzhou, Zhejiang မှ Explosion-proof Industrial Park, Qixing Town, Nanhu District, Jiaxing City, Zhejiang Province သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။နှစ်စတွင် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်း၊ တစ်နှစ်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ နှင့် နှစ်စတွင်ရောင်းချခြင်းတို့ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်၊ သို့မှသာ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် နေရာရွှေ့ပြောင်းမှု မမှားစေရန်။Feice Explosion-proof ၏ နေရာရွှေ့ပြောင်းမှုသည် အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ခိုင်မာသောအခြေခံအုတ်မြစ်ကို ချမှတ်ထားပြီး Feice လူမျိုးများသည် တောက်ပသောအနာဂတ်ကို ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိကြောင်း ယုံကြည်မှုနှင့် စွမ်းရည်များရှိသည်။ဤအောင်မြင်မှုများသည် ဝန်ထမ်းအားလုံး၏ ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့် ချွေးထွက်မှုတို့၏ ရလဒ်ဖြစ်သည်။လူတိုင်း အလုပ်ကြိုးစားကြပြီ။ကျေးဇူးတင်ပါသည်!
2016 ကို စောင့်မျှော်နေပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်ပါတယ်။Feice Explosion-proof ထုတ်လုပ်မှု အခြေခံသစ်၏ နှစ်စဉ် ဒီဇိုင်းနှင့် ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်မှာ ယွမ် ၁ ဘီလီယံဖြစ်သည်။ဥက္ကဋ္ဌ Xu Yuedi ၏ ဦးဆောင်မှုအောက်တွင်၊ Feice လူမျိုးများသည် ၎င်းတို့၏ ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော အသေးစိတ်ပုံစံကို ရေးဆွဲရန် ပိုကြိုးစားကြလိမ့်မည်။
တစ်ဒေါ်လာ ပြန်ရပြီး ဗီယင်ကျန်းကို သက်တမ်းတိုးသည်။စမှတ်အသစ်၊ ပန်းတိုင်အသစ်၊ လေထုအသစ်။မျှော်လင့်ချက်ရှိသော 2016 တွင် Feice လူမျိုးများ၏ တာဝန်နှင့် မစ်ရှင်များကို သတိရပါ၊ အတူတကွလုပ်ဆောင်ပါ၊ အမှန်တရားကိုရှာဖွေကာ လက်တွေ့ကျသော၊ ရှေ့ကိုတိုးကာ အခန်းအသစ်တစ်ခုကို ရေးကြပါစို့။